Xaflad lagu xusayay Maalinta Qaaxada oo lagu qabtay Bosaso – SBC
Xaflad lagu xusayay Maalinta Qaaxada oo lagu qabtay Bosaso
Xaflad lagu xusayay maalinta Qaaxada Aduunka oo maanta ku beegan ayaa ka dhacday gudaha magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari.
Xaflad siweyn loo soo agaasimay oo lagu qabtay barxada machadka caafimaadka ayaa waxaa ka qeyb galay qeybaha kala duwan ee bulshada Hay’adaha ku shaqada leh caafimaadka iyo duqa degmada Boosaaso Xasan Cabdalla Xasan.
Waxaa lagu jeex jeexay xafladan dhibaatooyinka qaaxadu leedahay iyadoo ay goobta ka aqriyeen xubno ka socday hay’ada Caafimaadka Aduunka iyo wasaarada Caafimaadka Puntland warbixino ku aadanaa qaaxada iyo heerarka kala duwan ee ay ka mareyso guud ahaan aduunka gaar ahaan geeska africa.
Duqa degmada Boosaaso oo isna goobta ka hadlay ayaa taabtay arimo badan oo ku aadan qaaxada isagoo tilmaamay in dadka iskaga shakiya in looga baahan yahay in ay durbadiiba tagaan goobaha baaritaanka cudurkaas .
Dhageyso Wariye Maxamed Jabra iyo warbixin ku saabsan xuska MaalintanWarbixin maalinta qaaxada Aduunka bosaso Jabra